Golaha garyaqaannada LSK oo loogu baaqay in ay taageeraan mucaaradka – The Voice of Northeastern Kenya
Golaha garyaqaannada LSK oo loogu baaqay in ay taageeraan mucaaradka
Raysul wasaare ku xigeenkii hore ee dalka ahna hogaaniyaha xisbiga mucaaradka ah ee ANC Musalia Mudafadi ayaa golaha ay ku bahoobeen garyaqaannada dalka ee LSK ku boorriyay in ay garab istaagaan isla markaana taageeraan axsaabta siyaasadeed ee kasoo horjeeda dowladda.
Hogaaniyaha Isbahasiga qaran ee Amani ayaa ka dalbaday xubnaha LSK in aysan dusha sare ka eegin arrimaha ka socda dalka, balse taas badalkeeda ay ku biiraan waxa uu ugu yeeray ololaha ay wadaan dadka Kenyanka ah ee meesha looga saarayo maamulka madaxweyne Kenyatta.
Mudafadi ayaa ka codsaday qareennada in ay xoojiyaan dadaallada lagu doonayo in xilka looga qaado madaxweynaha hadda talada haya ee dalka Uhuru Kenyatta oo hor kacaya xisbiga Jubilee.
Hadalkaan ayuu Musalia Mudafadi ka sheegay kulan casho sharaf ah oo uu xalay magaalada Nakuru kula qaaday xubno ka tirsan golaha qareennada qaranka ee LSK oo saameyn ballaaran ku leh hannaanka sharci ee dalka.
Kulankaasi ayaa waxaa ka qeyb galay garyaqaanno fara badan iyo siyaasiyiin kasoo jeedda garabka mucaaradka ee dalka.
Maalintii Axada ayey ahayd markii uu Mudafadi eedeyno dhanka muduqmaasuqa ah u jeediyay xukuumadda Jubilee, xili uu ka qeyb galayay munaasabad uu soo qaban qaabiyay madaxa maamul goboleedka Bomet Isaac Ruto oo dhawaan dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dhaawac soo gaaray looga soo daweeyay waddanka Koonfur Africa.
← Hogaamiyeyaal siyaasadeed oo dalbaday in xilka laga qaado wasiirka arrimaha gudaha
Xisaabiyaha qaranka oo sheegay in malaayiin lacag ah laga lunsaday ismaamullada gobolka xeebta →